गौतम बुद्ध विमानस्थलको ‘रनवे लाईट’ बिग्रिएपछि उडान रद्द- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भैरहवा — गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको धावनमार्गमा रहेको रनवे लाईट बिग्रिएपछि शुक्रबार साँझका सबै उडान रद्द भएका छन् । साँझपख काठ्माडौंबाट हुनुपर्ने ४ वटै उडान रोकिएका हुन् ।
‘पुरानो संरचनागत बत्ती भएकाले समस्या आयो ।,’ विमानस्थलका प्रमुख तथा निर्देशक टेकराज पोख्रेलले भने, ‘मौसम खराबीका कारण बिहीबार परेको चट्याङलेसमेत असर पारेको आशंका छ । उनले के कारणले बत्ती गयो भन्ने कुरा यकीन गर्न नसकिएको बताए । विमानस्थलका प्राविधिकले मर्मतको काम गरेपनि डबल फेजमा आउनुपर्ने करेन्ट सिंगल फेजमा मात्र आएकाले मर्मत पूरा नभएको उनले जानकारी दिए । यसकारण विमान असुरक्षित हुने देखिएपछि रद्द गरिएको उनले जनाए । शनिबार बिहानैबाट प्राविधिकसहितको विज्ञ टोलीले काम गर्ने र उडान भर्नेमा विश्वस्त रहेको पोख्रेलले बताए ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७६ १८:५५
जता सौगात, उतै सृष्टि
काठमाडौँ — डेब्यू फिल्म 'गाजलु'बाट मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठले अभिनयमा आशा देखाएकी थिइन् । अनमोल केसीको स्टारडमको छायामा परिनन् । तर, पछिल्लो समय उनी अभिनयभन्दा पनि अभिनेता सौगात मल्लसँगकाे प्रेम सम्बन्धले चर्चामा छिन्।
यो प्रेमिल जोडी पहिलोपटक फिल्म 'पोइ पर्‍यो काले'मा एकसाथ देखिएको थियो । यसपछि सौगातको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म 'माछा माछा' आइटम डान्स गरिन् । तर न फिल्मलाई फलदायी भयो, न सृष्टिलाई ।
तर, 'माछा माछा' रिलिज अगावै 'मासुभात'मा अभिनय गरेका थिए । तर, यसको रिलिजको टुङ्गो छैन । यधपि सौगातले हरेक फिल्ममा सृष्टिलाई सिफारिस गर्ने गरेको चर्चा सुनिन्छ । यतिबेला यो जोडी 'माइकल अधिकारी'मा श्रीमान श्रीमतिको भूमिकामा देखिँदैछन् । रियल लाइफका यी जोडीलाई पर्दामा भने खासै दर्शकले रुचाएको भेटिँदैन। बक्स अफिसमा फ्लप भएको 'पोइ पर्‍यो काले' पछिल्लो उदाहरण हो ।
कतिसम्म भने सृष्टिलाई खेलाउन निर्माण पक्ष राजी नभएपछि 'चपली हाइट–२'बाट सौगातले हात झिकेका थिए । फिल्म क्षेत्रमा स्टार कहलिएका कलाकारको यो ‍अव्यवसायिक प्रवृति देखाउनु कतिको उचित हुन्छ ? अनि सृष्टिकै हकमा प्रेमीसँग मात्र फिल्म खेल्न थालेपछि करियर र साख कता पुग्ला ?
भलै यो जोडीले एक अर्कालाई सिफारिस गर्ने आरोप इन्कार गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७६ १८:२९